Ngomyalelo we-NTV, i-series ye-TV entsha kunye nesihloko sokusebenza esithi "Taboo" isilungiselelwe ukupapashwa eSt. Petersburg, iskripthi esisekelwe kwincwadi ethi Roman Trakhtenberg ethi The Way of the Male.
Uchungechunge lwethelevishini luza kuba luhlu lwee-series-melodramas, ngasinye ngasinye esinikezelwa kwisihloko esahlukileyo. "I-Tabo" - oku kuluhlu lothotho lwamaqabane okwenene, phakathi kwebali - amabali endoda, kunye namazwana kunye nama-anecdotes eTrakhtenberg ngokwakhe kunye nabalinganiswa abathathu abakhulu.
Iingqungquthela ezitsha zethelevishini zingabizwa ngohlobo olutshintsho kumxholo woluvo oluthi "Ubundlobongela kwiSixeko", kodwa kuphela kwiRashiya kwaye amehlo abantu - abahlali baseMoroka yaseRashiya.
U-Roman Trakhtenberg, u-Ekaterina Rednikova, u-Boris Khvoshnyansky, u-Irina Goryacheva, umRoma uRyazantsev, u-Anna Luttseva, u-Ernest Timerkhanov, uVitaliy Taks, u-Olga Sukhorukova, uMarianna Korobeinikova, u-Evgenia Pavlin, u-Natalia Tretyakova, u-Yulia Dolgashova, uMark Gavrilov, u-Marina Titova bafotshwa kwi "Taboo".
I-Cinema, iposta, izaveli
"Madagascar 3" - kungekude
Ibhalansi yeHormonal yowesifazane
Yintoni eya kuba yihlobo le-2016: ukubikezelwa kwangaphambili kwesikhungo se-hydrometeorological centre
Cocktail "Limoncello ne champagne"
Umntwana ukwesaba ukuphatha amazinyo